“ကိုယ်ချစ်သောသူက ကိုယ့်ကို ပိုပြီး ချစ်လာစေဖို့” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » “ကိုယ်ချစ်သောသူက ကိုယ့်ကို ပိုပြီး ချစ်လာစေဖို့”
“ကိုယ်ချစ်သောသူက ကိုယ့်ကို ပိုပြီး ချစ်လာစေဖို့”
Posted by naychanyan on Oct 9, 2010 in News |6comments
ချစ်ခင်မေတ္တာမျှကြတဲ့ လူ ၂ ဦးကြားမှာ တစ်ခါတစ်ရံ အေးစက်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေနဲ့ သွေးမနွေးတော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေ ရှိနေတတ်ကြမှာပါပဲ ။ အဲဒီလို အခြေအနေ မျိုးတွေ အထိ တွေ့ကြုံမလာကြစေဖို့ မရိုးနိုင်တဲ့ စကားလေးတွေ၊ ဟန်ဆောင်မှုမပါတဲ့ ကိုယ်ဟန်အမူအရာ ကလေးတွေနဲ့ ချစ်သူ ၂ ဦးကြားက အချစ်စိတ်ကို နွေးထွေးတက်ကြွလာစေနိုင်တယ် ဆိုတာ အကြံပေးချင်လို့ပါ။
လက်တွေ့ဘ၀ထဲက နည်းလမ်းကလေးတွေ ဖြစ်ပြီး သင်နဲ့ သင့်လက်တွဲဖော်တို့ကြားက အချစ်တွေ သွေးနွေးလာစေဖို့ အသုံးဝင်နိုင်စရာတွေလည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။
၁။ “မင်းကိုချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားလေးပါ ။ ရှက်နေဖို့ မလိုပါဘူး ။ တကယ်ရင်မှာရှိနေတာပဲ။ နေ့စဉ် ၁ ကြိမ်လောက်တော့ ကိုယ့်ချစ်သူကို ပြောလိုက်ပါ။ ဒီစကားလေးကို ကြားရတဲ့ မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ယောကျာင်္းလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အပေါ် ယုံကြည်စိတ်ချမှု ပိုတိုးလာပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်အပေါ် တုံ့ပြန်ချစ်စိတ်တွေလည်း သူ့ဆီမှာ နိုးကြားလာပြီး အချစ်တွေ နုပျိုရှင်သန်နေပါလိမ့်မယ် ။
၂။ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ကို သူ မမျှော်လင့်လဲ ရုတ်တရက် ပွေ့ဖက်လိုက်တာ၊ ကြင်နာမှုအပြည့်နဲ့ အနမ်းပွင့်ခြွေလိုက်တာ၊ ဒါမှမဟုတ် ကလိထိုးစနောက်လိုက်တာမျိုးဟာ သူ့ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လန်းဆန်းအားတက်မှုကိုဖြစ်စေပါတယ် ။ အရေးကြီးတဲ့ အပြုအမူ ၃ ခုလို့ ဆိုချင် ပါတယ် ။
၃။ ဓါတ်ပုံဟောင်းလေးတွေကို ၂ ယောက်အတူ ပြန်ကြည့်ရင်း တစ်ချိန်က သတိရစရာလေးတွေ၊ ချစ်ပုံရိပ်တွေကို စမြုံ့ပြန်ကြတာဟာလည်း နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။
၄။ ချစ်သူရဲ့ မွေးနေ့နဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့ကို မမေ့စေနဲ့ ။ ဒီထက်အရေးကြီးတာ ဘာမှမရှိလို့သာ အပြီးတိုင် မှတ်ထားကြစို့ ။
၅။ ပြုံးပြပါ ။ ဘာအကြောင်းမှမရှိလည်း ပြုံးပါ ။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ပြုံးပြီးကြည့်ပါ ။
၆။ သင့်ချစ်သူကို သင် ဘာကြောင့်ချစ်တယ်ဆိုတာ ပြောပြဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။ ရိုးသားလို့၊ဥာဏ်ထက်လို့၊ စိတ်ကူးသစ်တွေရှိလို့ သဘောကျမိတာ ဆိုတာမျိုး ပြောပြထားခြင်းဟာ သူ့စိတ်ဓါတ်နဲ့ သူ့အားမာန်ကို အကောင်းဆုံးပြုစုပျိုးထောင် ပေးခြင်းပင် ဖြစ်ပါတယ် ။
၇။ သင့်ချစ်သူပြောချင်တဲ့ စကားလေးတွေကို နားထောင်ပေးပါ ။ကိုယ်နဲ့တိုက်ရိုက် မသက်ဆိုင်ရင်တောင် သူ့ရင်မှာ တင်းကျပ်လို့ ဖွင့်တာကို ဂရုတစိုက်နားထောင်ပေးတာဟာ သူ့ကို သိပ်ကြင်နာရာ ရောက်ပါတယ်။ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ ထပ်တူကျကျ မကျကျ အတူတူမျှဝေပေးတယ်ဆိုတာ ချစ်သူတွေကြားက အရေးပါတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ ﻿
ကောင် လေး has written9post in this Website..
View all posts by naychanyan →
ချစ်သူများ ပြစ်လို့.. စိတ်ညစ်နေရင် ဘာမှ ယတြတွေ လုပ်မနေနဲ့.. ဓါတ်ပုံကို စိုက်ကြည့်.. ၇ရက်လောက် မေတ္တာသာပို့.. တနေ့တာရဲ့ အချိန်တော်တော် များများ.. လုံးဝ မျက်နှာ မလွဲဘဲနဲ့ကိုပို့.. တခြားဘာမှ မလုပ်နဲ့.. စိတ်စုစည်းမှု အားကောင်းမှုပေါ်မူတည်ပြီး သစ္စာဖောက်ရင်တောင် ငိုယိုပြီး တောင်းပန်ပြီး သစ္စာဖောက်မိပါတယ် ခွင့်လွတ်ပါလို့ တောင်းပန်လာစေရမယ်..
ဆူးကတော့ အဖိုးတန်ပြီး အလကားရတဲ့ မေတ္တာ လူတယောက်ထဲ အတွက် အသုံးချရတာထက် အများကို ဖြန့်ဝေလိုက်တာ ကောင်းမယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။
သတ္တ၀ါတွေ တစ်ဦးပေါ် တစ်ဦး မေတ္တာထားနိုင်ကြပါစေ။
တကယ်လား အန်တီဆူးရဲ့။ ကျုပ်ကို နန္ဒာလှိုင်ကြီး သစ္စာဖောက်သွားဒယ်။ သဇင်လည်း ဖောက်ခဲ့ဒယ်။ မိုးဟေကိုလေးကတော့ အထောက်အထားတောင် ရှိတယ်။ နောက်ဆုံးကတော့ မော်ဖူးမောင်ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးဘဲ။ ကျုပ်ကိုခွဲယုံတင်မကဘူး လက်ထောင်ပြပြီးတောင် ဆဲသွားသေးဒယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ခုနှစ်ရက် ကြည့်ပြီးမေတ္တာပို့ရင် တကယ်ပြန်လာကြမှာလား။ ရိုးရိုးပြန်လာတာ မဟုတ်ဘဲ တယောက်စီ လူခွဲပြီးလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ တပြိုင်နက်ထဲ မေတ္တာပို့လိုက်ရင် သူ့ဟာငါ့ဟာနဲ့ ဝိုင်းလုနေမှာဆိုးလို့။ ကျုပ်မှာက တခုပဲရှိတာ.. အချစ်ကိုပြောပါသည်။
ဦးကြောင်ကြီး မေတ္တာအားကောင်းရင် နန္ဒလှိုင်ဆို အစစ်တောင်ပါအုန်းမယ်.. (ယောင်္ကျားနဲ့ ကလေး) သဇင်နဲ့ မိုးဟေကတော့.. တူတူလာလို့.. အိမ်တခါး တယောက်စာပဲ ရှိတယ်ဆို တခါးကြိုဖဲ့ထား.. (လေးယောက်လာမှာဆိုတော့လေ.. တယောက်ကို နှစ်ယောက်နှုန်း) သူတို့နဲ့ တူပါလာတဲ့ ဟိုင်းဘောစ်တွေကို လည်း မုန့်ဝယ်ကျွှေးခိုင်းလို့တောင် ရသေးတယ်။
ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့လို အိမ်ထောင်သက်ဝါရင့်နေတဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေအတွက် ပိုအသုံးဝင်ပါတယ်။ အင်း သွေးပူလာအောင် စမ်းကြည့်ရသေးတာပ..။
အပျိုကြီး ၊ လူပျိုကြီး တွေ မပါ တာ က ဟုတ် ပါ ပြီ အ သည်း ကွဲ နေ တဲ. သူ ကို တော. ကူ ညီ သင်. မယ် ထင် တယ် … ဟီး ဟီး ..